Shiinaha oo si rasmi ah safaarad uga furtay Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Shiinaha oo si rasmi ah safaarad uga furtay Muqdisho
Mareeg.com: Dalka Shiinaha ayaa maanta si rasmi ah dib u furay safaaraddii uu ku lahaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.
Dalal badan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay dib u soo celinayay xiriirka dibloomaasi ee ay la leeyihiin Soomaaliya, kaddib markii ay ka soo raysay xaaladda ammaanka caasimadda.
Safiirka cusub ee Shiinaha u qaabilsan Soomaaliya Wei HongTian oo sidoo kale loo yaqaanno ‘Warsame’, dibloomaasiyiin ka socday dalka Shiinaha, madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, danjiraha Qaramada Midoobay u fadhiya Soomaaliya, Nicholas Kay iyo dibloomaasiyiin kale ayaa ka qeyb-galay xafladda furitaanka safaaradda Shiinaha.
Madaxweyne Xasan ayaa xiriirka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Shiinaha ku tilmaamay mid soo jireen ah, waligiisna uusan xumaan tan iyo markii labada dal ay yeesheen xiriirka dibloomaasi.
Madaxweynaha ayaa dib u furidda safaaradda Shiinaha ee Muqdisho ku tilmaamay tallaabo sii xoojineysa xiriirka ka dhaxeeya labada dal.
Wariye iyo macalin lagu dhaawacay Muqdisho